भनेजति किन हुँदैन इन्टरनेटको स्पीड ? - समय-समाचार
भनेजति किन हुँदैन इन्टरनेटको स्पीड ?
२० भाद्र २०७७, शनिबार १९:४२
काठमाडौं, भदाै २० । सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको गति सुस्त हुनुमा आफूहरुको मात्रै कमजोरी नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन्। प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आज गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेटको गति सुस्त हुनुका कारणबारे प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे।
सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट ल्याउने व्यान्डविथ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारण समेत इन्टरनेटको गति कम हुने गरेको बताए। सुबिसु केवल नेट प्रालिका सीईओ विनयमोहन साउदले भारतका टाटा, एअरटेल लगायतका कम्पनीमा समस्या आउँदा, कुनै सेवा क्षमताभन्दा धेरै प्रयोग हुँदा र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डिभाइसको गुणस्तर आदि कारणले पनि इन्टरनेट स्लो भएको हुन सक्ने बताए। “ग्राहकको गुनासो जायज नै हो, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण आफूसँग भएको क्षमताभन्दा धेरै एमबीपीएस दिन्छु भनेका पनि हुन सक्छन्, तर धेरै समस्या हाम्रो कारणले मात्रै आएका हुँदैनन्,” उनले भने।
साउदका अनुसार नेपालका सेवा प्रदायक उपभोक्ता र सर्भर वा एपबीचको प’ल मात्रै हुन् र तीन वटा पक्षमध्ये एउटामा समस्या आयो भने इन्टरनेट स्लो हुन्छ। कुनै बेला फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका प्लेटफर्ममै समस्या आउँदासमेत उपभोक्ताले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नै दोषी ठान्ने उनीहरुको गुनासो छ।
यस्तै भायनेट कम्युनिकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले इन्टरनेट सुस्त हुने उपभोक्ताको गुनासो कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने बताए। उनले भने, “अहिले टिकटकको कारण नै इन्टरनेट स्लो भएको छ। भोलि यस्तै अर्को एप आउला।”
अहिले ८० प्रतिशत इन्टरनेट खपत भिडियोमै रहेको र यो बढ्दो क्रममा रहेकाले आउँदा दिनमा कसरी गुणस्तरीय इन्टरनेट दिने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बोहोराको भनाइ छ। बोहोराले ठूला प्लेटफर्मका सर्भर र एक्सचेञ्ज नेपालमा राख्न सकेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई गरिने आलोचना केही कम हुने आशा व्यक्त गरे। कहिलेकाँही प्रतिस्पर्धाको नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि ग्राहकले गुणस्तरीय इन्टरनेट नपाएको हुन सक्ने बोहोराको स्वीकारोक्ति छ।
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले देशमा भइरहेको अनेक अभावका बीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले दिएको सेवामा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बताए। महामारीको बेलामा इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारको लागि विकसित देशले व्यान्डविथ बढाउनेदेखि अन्य धेरै पहल गरेको, तर नेपाल सरकारले भने उपभोक्तालाई छुट दिने निर्देशन बाहेक केही नगरेको खनालको आरोप छ।
‘‘इन्टरनेटको गुणस्तर सेवा प्रदायकको हातमा मात्रै छैन। इन्टरनेट आफैमा एउटा ठूलो प्रणाली हो। सरकार, नियामक र उपभोक्ताले धेरै बुझ्न बाँकी छ। यदि सेवा प्रदायकका दुःख बुझ्ने हो भने सेवाप्रदायकलाई गाली गर्ने थिएनौं होला,’’ दूरसञ्चार विज्ञ खनालले भने।